शैक्षिक अवस्था खस्केको छ अबका बर्षहरुमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागी विशेष जोड दिन्छु । • Kalanga News
गृह/अन्तरर्वार्ता/शैक्षिक अवस्था खस्केको छ अबका बर्षहरुमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागी विशेष जोड दिन्छु ।
स्थानिय तहको निर्वाचन भएको एक बर्ष पुरा भएको छ । जनताले आफ्नो हक अधिकारको प्राप्ती र विकासका लागी जनप्रतिनिधि चुनेका छन । अब जनप्रतिनिधिले जनताको चासो र सरोकारको विषयमा ख्याल राख्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सिंहदरबारको सेवा गाँउघर आउनु पर्छ तर सिंहखबरवारको भ्रष्टाचार होईन भन्ने तर्फ जनता भनाई छ । दुई नगरपालिका र दश गाँउपालिका भएको दुर्गम क्षेत्रको रुपमा परिचित बझाङका जनप्रतिनिधिले के गर्नु जरुरी छ । अबको स्थानिय सरकारको मिसन र विकासको गति कसरी लिन्छ लगायतका विषयमा कालंगा न्युजका लागी सहकर्मि आशिष बहादुर सिंहले छविसपाथेभेरी गाँउपालिका वडा नं ५ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्र ठगुन्ना संग कुरा गर्नु भएको छ ।
स्थानिय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भयो ? तपाई वडा अध्यक्ष भएकोमा कस्तो महसुस गर्नु भएको छ ?
म वडा अध्यक्ष भएकोमा मलाई एकदमै गर्वको महसुस भएको छ । किनभने मलाई यहाँका जनताले आफ्नो अमुल्य मत दिएर वडा अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा विजय गराउनु भएको छ उहाँहरु लाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँहरुको साथ र सहयोगले गर्दा नै मैले यस ठाउंको विकाश गर्र्र्ने अवसर पाएँ । यहाँको धार्मिक तथा पर्यटकिय क्षेत्रमा विकाश गर्न अत्यन्तै महत्वका साथ काम गर्ने,सोचका साथ अगाडी बढेको छु ।
राजनीति भनेकै सामाजको बिकास र समाज लाई सम्बृदिको बाटोमा लैजाने माध्यम नै राजनीति हो भने जनता सँग नजिक हुने जनताको सुख दुख सगँ खेल्ने माध्यम भनेको । राजनिती हो त्यसैले मेरो वडा र छबिस पाथिभेरा गाउँपालिकाको बिकास गर्न हेतुले म राजनीतिमा आएको हु राजनिती भनेको जनताको सबैभन्दा नजिक हुनै भनेकै राजनिती पाटो हो मेरो सोच विचार भनेको यहाँका गरिव जनताहरुका लागी सेवा सुविधाहरु पाउन भन्ने विश्वासका साथ म लागी परेको छु ।
तपाईको वडामा भएका समस्या समाधान गर्न तपाई के गर्नुहुन्छ ?
मेरो वडामा समस्याहरु थुप्रै छन् समस्या समाधान गर्ने लागी परेको छुँ पहिलो बर्ष सबै बस्त्ीमा सडक पु्याउन सफल भएको छुँ अझ बिद्युतको पनि समस्या रहेको छ । त्यसलाई अहिलेको बर्ष योजना छनौट गरी बिद्युत बाल्ने प्रयासमा जुटिरहेको छुँ । भने सबै समस्या लाई एकै बर्ष भित्र नभएपनि पाँच बर्ष भित्र मेरो वडामा देखिएका समस्या समधान गर्ने मेरो बुद्धी बिवेकले भ्याय सम्म काम गरिरहेको छुँ । मैले यि सवै समस्या समाधान वडामा मात्र नभई प्रदेश,केन्द्र वाट सहयोगको अपेक्षा राखेको छु ।
निर्वाचित भए पछि वडावासीहरुको कस्तो साथ कत्तिको पाउनु भएको छ ?
म वडा अध्यक्ष भए देखी सवै वडा वासी दाजुभाई, दिदिबहिनीहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरिरहनु भएका छ । र मेरो कार्यकाल सम्म पनि यसरी नै सहयोग गरिरहने छन् ।भन्ने विस्वास साथ अगाडी बढि रहेको छु ।
सामाजिक समस्याको रुपमा रहेको वालविवाह, बहुविवाहका कुराहरु पनि छन् यस लाई हटाउँन तपाई के गर्नुहुन्छ ?
तपाइले एकदमै ठिक कुरा ल्याउनु भयो यहाँ सामाजिक समस्या भन्दा यो बझाङ्ग जिल्लामा नै अलि बढि नै छुवाछुत भेदभाव ,वालविवाह हुने जस्ता घटनाहरु थुप्रै छन् । यसमा छबिस पाथिभेरा गाउँपालिकाले जनचेतनाका कार्यक्रमहरु गाउँपालिका बाट सञ्चालन गरेका छौ । ५ बर्ष भित्र यस लाई अन्त्य गर्न वडा बाट मात्र नहुने भएकाले गाउँपालिका देखी प्रदेश केन्द्र स्तर बाट माग गरी प्रयास गर्न छु ।
छबिस पाथिभेरा गाउँपालिकाको नवनिर्वाचित वडा अध्यक्षको रुपमा जनप्रनिधि भएर आउनु भएको छ । वडाको बिकास का लागि के–कस्ता योजनाहरु अगाडी सार्नु भएको छ ?
वडाको विकासका लागि मुख्य पर्यटनको लागि बढी जोड दिएका छौ । त्यसका साथ साथै अन्य भौतिक निर्माका कुरा पनि छन् । उद्यमशीलताका कुुरा पनि छन् । आर्य आर्जनका कुरा पनि छन् वडाको सर्वाङगिक विकासका लागि बिभिन्न खाले योजना अगाडी सारेका छौ । कोहि योजना एक बर्षको सम्पन्न हुने खालका योजना छन् । भने कोहि दुई बर्षका र कोहि तीन , चार बर्षका छन् । यी योजना लाई समयमै सम्पन्न गर्न सक्यौं भने सम्वृद्धशाली वडा र गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य छ ।
चुनाबको बेला कुनै पाटी बाट उँम्मेदार भएर आउनु भयो अहिले सबै जनता लाई एकै नजरले हेर्नुहुन्छ कि फरक ?
ःहिजोको दिनमा चुनाब चिन्न सुर्य लिएर गाउँमा चुनाब बेला उम्मेदार भएर गाउँमा भोट मग्न गएको हु अहिले म सबै जनताको जनप्रतिनिधी हुँ त्यसकारण सबै जनता लाई हेर्ने नजर एउटै छ । मलाई लाग्छ स्थानिय तहका जनता र विभिन्न खालका दल राजनीतिमा कृयाशिल हुने सवैले लाई गुण र दोषको आधारमा मलाई समर्थन र विरोध गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ । स्थानिय जनताले हामीलाई राम्रो काम गर्न पठाएको हो । जनताको समृद्धि अनि ठाउँको समृद्धि अनि ग्रामिण भेगमा वस्ने सवै जनताले राम्रो ढंगले पेशा व्यवसाय गरेर वाच्न पाउन र स्वतन्त्र ढ्गले आफ्नो मत दिएका हुन त्यही मतको कदर गरी सम्मान गछौ ।
तपाई यूवा नेता पनी हो बेरोजगारी यूवाको लागी तपाई के गर्नुहुन्छ ?
बेरोजगार यूवाको लागी वडा बाट मात्र सबै कुरा सम्भब हुदैन यसको लागी गाउँपालिकाले नितीगत निर्णय गरेको छ । बरोजगार यूवा लाई ब्यबसाहय गर्ने चाहाने यूवा लाई गाउँपालिका बाट सम्भब हुने योजना गाउँपालिकाले दिने गरेका छु भने यूवा लक्षित कार्यक्रम प्रदेश केन्द्र स्तर बाट नै छनौट गर्नु पर्नेमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
तपाई छसिब पाथिभेरा नमुना गाउँपालिका बनाउन के गर्नुहुन्छ ?
गाउँपालिका नमुना बनाउन गाउँका सबै जनताको सोच परिबर्तन हुन जरुरी छ जनताले जनप्रतिनिधी सँग सहयोगको भावना राखेर काम अगाडी बढाउन सकेपछी नमुना गाउँपालिका बनाउन केही समय लाग्दैन भन्ने पनी मलाई लागेको छ । छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका अन्य गाउँपालिका भन्दा पहिले देखि नै शिक्षीत गाउँपालिका भएकाले अन्य गाउँपालिका भन्दा केही फरक पक्कै पाईन्छ । यस गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधी शिक्षीत हुनुहुन्छ यस लाई जनताले आफुले चाहेको जनप्रतिनिधी पाएका छन् ।जनताले पनि बिकास भएको महशुष पाचँ बर्ष भित्र गर्नेछन् ।
तपाईले शिक्षा क्षेत्र अगाडी बढाउने सोच बनाउनु भएको छ । झन शैक्षीक अबस्था दिन प्रतिदिन खस्किदै गएको यसमा कसको कमजोरी हो जस्तो लाग्छ ?
कमजोरी सबैको छ । सबैभन्दा पहिलो पाठशाला भनेको अभिभाबक हुन उनको पनी उतिकै भुमीका हो । आफ्नो बालबच्चाको हेरचाहा गर्ने अभिभाबकले पनि गर्ने हो भने बिद्यालयमा पढाउने शिक्षकले पनि लार्पबाही गरेको देखिन्छ । बिध्यालयका सबै शिक्षक यसको भागेदार छन भने मुख्य भागेदार प्रधानाध्यापक देखिन्छ बिध्यालय बिहान १० बजे आउने बेलुका ४ बजे जाने शिक्षक कहि कतै खोजे मात्र भेटिन्छन् सबै शिक्षक बिग्रेको हुनाले शैक्षिक अबस्था खस्केको पाईन्छ ।
स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधी तपाई हुदा किन कार्बाही गर्नु भएन के तपाईको जिम्मेवारी होईन ?
म आफै सबै छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका भरी रहेका बिध्यालयमा नपुगेको कोही बिध्यालय पनी छैन् म सबै बिध्यालयमा पुगेको छु । मैले दैनिक बिध्यालयमा नआउने शिक्षकको रातो लाउने पनि गरे कतिपय शिक्षकले त मलाई गाली समेत गरे त मलाई जे गरेपनी बालबालिका लाई राम्रो शिक्षा दिन सके शिक्षकको पहिलो जिम्मेवारी हो तर शिक्षकले बुझेका छैनन् कि हाम्रो पढाउने जिम्मेवारी भनेर शिक्षक सरकारी बिध्यालयमा आफ्ना केटाकेटी अन्य निजी बिध्यालयमा लगाउने गरेको हुनाले शिक्षक जिम्मेवार देखिदैनन् अब साचिकै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने शिक्षक लाई काबा्रही गरिनेछ ।
वडा वासी बाट तपाइले लिएको निर्णय लाई कस्तो खालको साथ पाइरहनु भएको छ?
जनताहरु लाई म प्रति के विश्वास छ भने पहिले पनि यसले जनताका लागी केही गरेकै हो रअब पनि केही राम्रो काम गर्ने छ भन्ने उनिहरुलाई विस्वास छ ।जनताको कुरा भन्दा बाहिर गएर म काम गर्नपनि सक्दिन् र उनिहरुको सुझाव अनुसार नै काम गर्ने छु ।
तपाईको गाउँपालिकामा मंहिलाका समस्या के के छन । यसका लागी तपाई के गर्नुहुन्छ ?
महिलाका समस्या हरु पुरुष जति भारत लगाएत विदेशतिर जाने गर्छन महिलाहरु घरमै वसी खेतीपाती गर्ने गर्छन । सवै ठाउँमा गाडी पुगेको छैन महिलाल भारी वोकेर जिवन निवार्हा गर्नुपरेको छ । हाम्रो गाउँपालिकामा महिलाले पनि सबै कुरा बुझेका छन् । अन्य क्षेत्र जस्तो बिकरल अबस्था छैन । अव यसको लागी गाउँपालिकामा पहल गरी रहेका छौ । महिलाका लागी सिपमुलक तालिम सिलाई कटाई गरेको गाउँपालिकामा रहेका विद्यमान् समस्या जस्तै वेरोजगारी अशिक्षा रुढिवाद्धीको निर्मुल गर्नेका लागी आवस्यक विकासका कामहरु अगाडि बढाई रहेको छु ।
तपाईको गाउँपालिकामा वालविवाहा कतिको भईरहेको छ । समाधानको लागी के गर्नुहुन्छ ?
वाल विवाहा एकदमै बढी भईरहेको छ यस क्षेत्रमा पहिलाका भन्दा त केही मात्रामा कम भएको छ । किशोरी हरुलाई चनचेतना मुलक कार्यक्रम गरेपछी विद्यालयमा शिक्षक विधार्थी हरुलाई समाजका जान्ने बुभ्ने मानिसलाई राखेर भेला गरेपछी समाधान हुन्छ भन्ने लागेको छ । पहिलेको भन्दा कम पनि हुदै गएको पाईन्छ
अन्यमा तपाई लाई भन्न मन लागेका केही कुरा बाकी रह्यो की ?
हाम्रो गाउँपालिका भएका धार्मीक तथा पर्यटकिय स्थलको पहिचान गर्ने हामी सबै लागीपरेका छुँ । बिकास हुने क्रममा जनताले साथ दिए पक्कै तपाई जनताले सोचेको सस्तो छसिब बन्ने छ ।